Afghanistan: 3400 oo qof ayaa ku dhintay 2019-kii |
Qaramada Midoobe ayaa Sabtida maanta ah sheegtay in colaadda dalka Afghanistan ay ku dhinteen 3400 oo qof ayna ku dhaawacmeen 7 kun oo kale sanadkii aynu ka soo gudubnay ee 2019.
Howlgalka QM ee Afghanistan ee loosoo gaabiyo UNAMA ayaa ku eedeeyey kooxaha Taliban, ISIS iyo mintidiin kale iney sabab u ahaayeen 49% dadka geeriyooday. QM ayaa intaa ku dartay in ciidamada taabacsan dowladda iyo kuwa Isbahaysiga uu Mareykanku ku jiro ay sababeen 43% dadka ku nafwaayay colaadda Afghanistan sanadkii hore halka 6% ay sababsadeen isku dhacyo kale.
Warka QM ayaa imanaya iyadoo heshiis xabad joojin muddo todobaad ah oo lagu yareynayo colaadda ay maanta ka dhaqangaleyso Afghanistan taasi oo wadada u xaareysa in Mareykanku uu heshiis nabadeed la saxiixdo kooxda Taliban 29-ka bishan, taasi oo lagu raja weyn yahay iney soo afjarto colaadda 18 sano jirsatay ee dalkaasi, oo noqotay tii ugu waqti dheereyd ee uu Mareykanku ku lug yeesho.
Saxiixa heshiiska Mareykanka iyo Taliban ayaa Sabtida danbe ka dhici doona dalka Qatar, iyadoo ay goobjoog ka noqon doonaan ergooyin ka socda caalamka.
Heshiiska ayaa suurtagelin doona in si tartiib-tartiib ah ay dalkaasi uga baxaan 13 kun oo askari oo Mareykan ah, islamarkaana saamaxaya fursad ay ku wada hadlaan dhinacyada Afghanistan si ay u gaaraan xabbad-joojin rasmi ah oo dalka oo dhan ka hergasha ayna sameeyaan awood qeybsi.